Hetsipanoherana manameloka ny fanemorana indray ny fifidianana ao Thailand · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2019 5:18 GMT
Mpanao hetsipanoherana tao Bangkok nanakiana ny fanapahankevitra fanemorana indray ny fifidianana kasaina hatao amin'ny 24 Febroary 2019. Sary avy amin'i Prachatai, mpiaramiasa manome votoaty ho an'ny Global Voices.
Sambany hatramin'ny Desambra 2018 nanesoran'ny governemanta ilay fandraràna ny fivorivorian'olona dimy na mihoatra, nitondra ireo teratany Thai hidina an-dalambe ny vaovao iray milaza ny mety ho fanemorana ny fifidianana.
Ny 6 Janoary ireo mpanao hetsipanoherana no nifamory tao amin'ny tetezana kelin'ny toeram-piantsonan'ny fiarandalamby ambanin'ny tany “Victory Monument BTS” mba hanameloka ny fanemorana indray ny fifidianana. Nandritra izany, tamin'ny 8 Janoary, nanodidina ny 200 ireo mpanao hetsipanoherana no nanjohy ny fihaonambe iray goavana kokoa tao amin'ny fihaonandalana Ratchaprasong ao afovoan-tanànan'i Bangkok nitaky ny hamoahana didim-pitondràna mametra ny daty sy ireo fanomanana ny fifidianana hatao amin'ny Febroary.
Ny sasany amin'ireo mpitarika antoko politika namaritra ilay hetsipanoherana ho toy ny fitaratry ny fanirian'ny vahoaka Thai mba hiverenan'ny demaokrasia.
Nahemotra indray ny Demaokrasia.
Tamin'ny 2014, naka fitondràna ny tafika Thai ary nametraka ny Filankevi-pirenena momba ny Fandriampahalemana sy Filaminana (NCPO) mba hitantana ny firenena. Nampidiriny am-ponja ireo mpitarika maro avy amin'ny fanoherana, napetrany ny fanarahamaso henjana an'ireo media, ary nataony ho heloka tsy araka ny lalàna ny fivorivorian'olona dimy na mihoatra eny amin'ireo toerana natao ho an'ny daholobe.
Voady nataony ny hamerina ho an'ny sivily ny fitondràna ary hikarakara fifidianana vantany vao tafapetraka ireo fanavaozana politika. Nanao drafitra lalampanorenana izy tamin'ny 2016, izay nilaza ny hanaovana fifidianana nefa niaro hatrany ny fitohizan'ny fahefana matanjaky ny tafika tany amin'ny ambaratonga rehetra teo amin'ny fitantanan-draharaha.
Ny Jeneraly Prayut Chan-o-cha, filohan'ny NCPO sady praiminisitra, dia nanjavozavo ihany tao anatin'ny famaliany ireo fanontaniana momba ny daty hanaovana fifidianana. Saingy tamin'ny Desambra 2018, nohamafisin'ny governemantany fa hatao amin'ny 24 Febroary 2019 ny fifidianana. Nofoanan'ny governemanta ihany koa ny fandraràna ny fampielezankevitra politika sy ny fivoriambahoaka.
“Nahemotra indray. *****”Reninareo”
Ny 3 Janoary, nolazain'ny lefitry ny praiminisitra , Wissanu Krea-ngam, fa mety hahemotra ny fifidianana tokony hatao ny 24 Febroary mba tsy hifanindry amin'ny fiomanan'ny governemanta amin'ny fanosorana (fanandratana ho amin'ny toerany) ny Mpanjaka Maha Vajiralongkorn izay hatao amn'ny 4 May. Andrimpanjakana iray tena hajain'ny ao Thailand ny fitondram-panjaka, ary ny governemanta dia mampihatra ny lalàna iray isan'ny henjana be eto an-tany momba ny Faniratsiràna ny Mpanjaka (fitenenan-dratsy ny mpanjaka)
Niteraka hatezeran'ireo mpianatra maro eny amin'ny lisea ny fanambaràna nataon'i Wissanu ary nitarika azy ireo hampiasa ny tenifototra #เลื่อนแม่มึงดิ (Luen Mae Mueng Di: Nahemotra indray, ****Reninareo) ao amin'ny Twitter, mba hanehoan-dry zareo ny hasosorany. Nampiasain'ireo mpianatra ihany koa ny tenifototra #dek62 (Ankizin'ny 2019).
Mpampiasa iray ao amin'ny Twitter, mpitarika mpianatra, no nandefa ity tao amin'ny kaontiny araka ny nitateran'ny tranonkalambaovao tsy miankina Prachatai azy:
izao olana rehetra izao dia satria tsy olon'ity tontolo ity Ing. Prayut. Farafaharatsiny Ing. Prayuth mba nivoaka sy niala tsiny tamin'ireo ankizy.
Ilay filazàna tany am-boalohany hoe hatao amin'ny Febroary ny fifidianana dia efa niteraka sahady fandaminana ireo fanadinana manerana ny firenena “General Aptitude Test and Professional Aptitude Test (GAT-PAT)” izay andraisan'ireo mpianatra anjara mba hidirany eny amin'ny oniversite. Ny fanemorana ny fifidianana dia mety hidika fanelingelenana indray ny tetiandron'ny GAT-PAT sy ny fiomanan'ireo mpianatra hiatrika io fanadinana lehibe io.
Neken'ny Jeneraly Prayut ny fahatsapan'ireo mpianatra ary nantsoiny hoe “zafikeliny” izy ireo, rehefa niantso ny hisian'ny faharetana sy fahaiza-mandinika izy.
Fifidianana amin'ny Martsa hoe?
Ny 11 Janoary, andro vitsy monja taorian'ny nipoahan'ireo hetsipanoherana, nanao fanambaràna i Wissanu, lefitry ny praiminisitra, fa ny 11 Martsa raha ela indrindra no hatao ny fifidianana.
Ny mazava avy amin'io fanambaràna io dia ny hoe tsy ho voatazona sahady ny 24 Febroary tokony hanaovana fifidianana. Tsy nitondran'ilay fanambaràna fanamarihana ihany koa ny hoe nisy taratasy fampahafantarana nalefan'ny Departemantam-Paritra misahana ny Fitantanana izay manome baiko ho an'ireo mpisahan-draharaha isam-paritra mba hampiato ireo fanomanana fifidianana.
Nampametraka fanontaniana ho an'ireo mpikatroka ny fampanantenana sy firotsahan'ny NCPO hamerina ny fitondràna ho an'ny sivily, noho izy nanemotra matetika ny tetiandrom-pifidianana.
Mandritra izany, ny jeneraly lehiben'ny fibaikoana ny tafika dia niampanga ireo mpanakiana ho “tsy miraharaha” izay momba ny fifidianana. Lazainy fa ilain'ny governemanta ihany koa ny manao ho laharam-pahamehana ny fanosorana ny Mpanjaka.